भाषालय : २०१८ देखि तास्मानियामा नेपाली पुस्ताहरुलाई जोड्दै « MNTVONLINE.COM
भाषालय : २०१८ देखि तास्मानियामा नेपाली पुस्ताहरुलाई जोड्दै
“एकजना अभिभावक नेपालबाट आउनुभएको थियो । उहाँको नाति नातिना हेर्नका लागि । तर, घरमा बुबाआमा हुँदासम्म ठीकै थियो । जब उनीहरु काममा जान्थे त्यतिबेला हजुरबुबालाई आफ्ना नाति नातिनासँग कुराकानी गर्न समेत कठीन भयो । बुबाआमा अंग्रेजी नबुझ्ने, नाति नातिना नेपाली नबुझ्ने नबोल्ने । अनि भाषालयको सोच विकसित भएको हो ।” यो भनाई हो अष्ट्रेलियाको तास्मानिया राज्यमा अवस्थित लन्चेष्टन शहरमा विगत दुईवर्ष अघिबाट सुरु गरिएको नेपाली भाषालय विद्यालयका संयोजक ओमकुमार मगरको । उनी दुईवर्षअघिको घटनालाई सम्झदै भन्छन्, “सन्तोष अधिकारीजी हुनुहुन्थ्यो त्यतिबेला । उहाँले सुरु गर्नुभएको हो । यस भाषालयको अवधारणा नवराज मडवरीले ल्याउनुभएको थियो । त्यसमा हामी थपिदै गयौं । म पनि भाषा शिक्षकका रुपमा पढाउन सुरु गरेर अहिले यसको अध्यक्ष भएको छु । भाषालय सुरुवातमा यहाँका मेयर अल्बर्ट भ्यान्जेटन पनि सहभागी भएर हौसला दिएका थिए ।”
हरेक साता २ घण्टाको कक्षा हुने गरेको छ यहाँ । पहिलो घण्टा पढाई हुन्छ । भूगोल, संस्कृति, भाषा र संगीतका बारेमा जानकारी दिइन्छ । दोश्रो घण्टा नृत्य सिकाइन्छ । नेपाली भाषाकै गीतमा नाच्न सिक्दैछन् ३५ जना बालबालिका ।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको लागि आफ्नो भाषा, संस्कृति र कला कति धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ र दोश्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नका लागि सबैजना प्रयत्नशील छन् भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ भाषालय ।
हरेक साता २ घण्टाको कक्षा हुने गरेको छ यहाँ । पहिलो घण्टा पढाई हुन्छ । भूगोल, संस्कृति, भाषा र संगीतका बारेमा जानकारी दिइन्छ । दोश्रो घण्टा नृत्य सिकाइन्छ । नेपाली भाषाकै गीतमा नाच्न सिक्दैछन् ३५ जना बालबालिका । पूर्णतः स्वयंसवी भावनामा चलेको यो भाषालयमा मगरका अतिरिक्त यतिबेला प्रेम भट्टराई र कला पाठकले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । सिटी काउन्सिलले ५ हजार डलरको सहायता गरेको थियो जसबाट बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सामग्रीहरु, हलको भाडा र सहभागीहरुको ईन्स्युरेन्स गरिएको छ जानकारी मगरले दिए । भाषालयले विद्यार्थीहरुबाट लिने भनेकै दर्ताको बेला १ सय डलर हो । त्यस बाहेक कुनै शुल्क लिने नगरिएको उनी बताउँछन् ।
नेपालबाट वर्णमाला र कक्षा १ को किताब ल्याएका उनीहरु आफैं छलफल र अनुसन्धान गरी के पढाउने यसको तालिका पनि निर्माण गर्दछन् ।
संयोजक मगरले एमएनटीभीसँग भने, “डिसेम्बर २०१८ बाट स्थापित यो भाषालय निरन्तर चलिरहोस् यहाँका हाम्रा दोश्रो पुस्तालाई सदैव नेपाली भाषा सिकाउन पाइराखौं । हामो चाहना यत्ति हो ।”
माईग्रेसन एजेन्ट छान्नुअघि के गर्नुपर्छ ? आधिकारिकता कसरी जाँच गर्ने !
अष्ट्रेलियामा आप्रवासन सम्बन्धी काममा सहयोग गर्नकालागि निश्चित योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुलाई माईग्रेसन एजेन्टका रुपमा काम गर्न
शनिबारसम्मका लागि नेकपा स्थायी समिति बैठक स्थगित, बैठकअघि शीर्ष नेताबीच छलफलको प्रयास हुने
शीर्ष तहका नेताबीचको विवादका कारण सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको बैठक शनिबारसम्मका लागि